Périgny, Loir-et-Cher - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Jean-François Loiseau)
47°44′28″N 1°09′04″E﻿ / ﻿47.7411°N 1.1511°E﻿ / 47.7411; 1.1511
I Périgny, Loir-et-Cher dia kaominina ao amin'ny fivondronan'i Vendôme, ao amin'ny departemantan'i [[Loir-et-Cher]], ao amin'ny faritr'i Centre, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 41174. I Jean-François Loiseau no ben'ny tanàna mandritry ny taona . Ilay kaominina dia kaominina mpikambana amin'ny fivondronan-kaominin'i Communauté de communes de Beauce et Gâtine
Ny isam-ponin'i Périgny dia 188 mponina araka ny fanisana natao tamin'ny taona 1999. Ny haavon'ny toerana ambany indrindra dia 97 metatra. Ny haavon'ny toerana avo indrindra dia 131 metatra. Ny fisiana ara-daharampehintany ary ara-daharanjarahasin'ilay kaominina dia 47.7411° ary 1.1511° amin'ny soratra desimaly. Ny faritr'ora dia GMT+1.
Hita tao amin'ny "http://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Périgny,_Loir-et-Cher&oldid=622545"	Sokajy : TanànaTanàna any FrantsaTanàna ao amin'ny faritr'i Centre (région française)	Menu de navigation
Voaova farany tamin'ny 14 Martsa 2013 amin'ny 09:25 ity pejy ity